Nakidzwa kupera kwevhiki nemitambo yemahara kana yakaderedzwa uye kunyorera kwenguva yakati wandei (Ndira 20) | IPhone nhau
Nakidzwa kupera kwevhiki nemitambo yemahara kana yakaderedzwa uye kunyorera kwenguva yakati wandei (Ndira 20)
Iye zvino tinogona kuzvitaura nemuromo mukuru uye nekuchema kwakazara: Chatozopera Chishanu! Iye zvino unogona kuisa parutivi zvinyorwa uye mabasa ayo wako webasa anokupa iwe nekuti mumaawa mashoma unenge usununguka kusvika Muvhuro. Uye sezvo isu tichiri kunyudzwa mune kupisa kweiyo inotonhora polar wave, hapana zvirinani kupfuura kupedza kupera kwevhiki uchidziya uri kumba, uchifarira mitambo yemahara uye kunyorera (kana nezvirambidzo zvisingadzivisike) izvo nhasi ndinokuunzira mu iPhone News.
Sezvo isu tichigara tichida kuyeuka, usakanganwa kuti zvese zvekutengesa uye zvinopihwa izvo zvauri kuzoona pazasi ndizvo Nguva Yakatemwa, saka ini ndinogona kungovimbisa chete kuti anoshanda panguva yekutsikisa ichi posvo, asi ini handizive kuti vachazobviswa riini nevagadziri. Nekudaro, kunyangwe iwe uine vhiki rese pamberi pako, ndinenge ndiri kukurumidza kuwana avo vanokufarira zvakanyanya. Usavasiye vapukunyuke !!
1 MyClassTable yeMudzidzi
2 Kindergarten Math Mitambo
3 Uyu Hausi Muedzo: Kupona RPG Comic
4 QuickScanner: OCR PDF Scanner & Printer yeMagwaro Matsamba Emaresiti
5 Fishing Deluxe - Nguva dzakanakisa dzehove neKarenda yeKubata
6 Songbot: On-Demand Talk Shows & Nziyo
Zvakanaka, pamwe iyi app haina kunyatso kuitirwa kuti iwe unakirwe mukupera kwevhiki, asi inogona zvirokwazvo kuve inobatsira kwazvo muzvidzidzo zvako. MyClassTable Chishandiso "zvitatu muimwe" nekuti inosanganisa panguva imwecheteyo kendendari yekirasi, runyorwa rwebasa, uye chirongwa cheManotsi ako.
MyClassTable yeMudzidzi Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana ine dhisikaundi ye66%, ye € 0,99 chete.
Kindergarten Math Mitambo
Mutambo wakanakisa wekudzidzisa waunogona kunakidzwa pamwe nevana vako pavanenge vachidzidza pfungwa dzavo dzekutanga dzemasvomhu «kuburikidza zvinopfuura zana zvinonakidza masvomhu mitambo»Nyeredzi mhuka dzako dzaunofarira.
Uyu mutambo unoitirwa vakomana nevasikana vari pakati pemakore matanhatu kusvika masere ekuberekwa, mutengo waro wenguva dzose ndi2,99 euros asi ikozvino unogona kuuwana wakasununguka kwenguva pfupi.
Uyu Hausi Muedzo: Kupona RPG Comic
Uyu hausi muyedzo Ndicho graphic uye inofambidzana novel izvo zvinokutora iwe kuenda kunzvimbo yepascalyptic uko kwaunofanirwa kuisa hunyanzvi hwako hwekupona pakati pemhirizhonga inotonga "zuva rekuparadzwa", kusanganisira gasi inoshamisa inouraya iyo inotyisidzira Hunhu.
Uyu Hausi Muedzo: Kupona RPG Comic Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
QuickScanner: OCR PDF Scanner & Printer yeMagwaro Matsamba Emaresiti
QuickScanner Pro inoshandura yako iPhone, iPad kana iPod Kubata kuita yechokwadi nharembozha scanner "yaunogona kutora kwese kwaunoenda nekuishandisa kwese kwese". Uye zvakare, inosanganisira yakawanda yekugadzirisa maficha senge kutenderera, dema uye chena, greycale, ruvara, OCR, peji detector kana kugovana mugore kana kuburikidza nemagariro network.
QuickScanner Iyo ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Fishing Deluxe - Nguva dzakanakisa dzehove neKarenda yeKubata
Fishing fan? Ipapo ichi ndicho chishandiso chauri kuzoshandisa zvakanyanya pane ako getaways.
Kubata Deluxe kunobatsira iwe kuronga nzendo dzako, kufanofungidzira chaiwo mazuva uye nguva nemikana yakakura yekubudirira kwekuredza, kune chero nzvimbo.
Chinoshanda sei? Maawa akanakisa ekuredza anoverengerwa zvichienderana neruzivo nezveMwedzi uye Zuva. Gara uchiziva mazuva akanakisa ekuredza uye nguva dzakatarwa neFishing Deluxe!
Kubata Deluxe Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana ine 66% dhisikaundi ye0,99 euros chete kwenguva yakati rebei.
Songbot: On-Demand Talk Shows & Nziyo
Con Songbot unogona «tsvaga nhepfenyuro dzese dzepasi rose kuti uwane rwiyo rwaunoda kuteerera. Ingo nyora muzita rerwiyo kana muimbi waunoda uye wotanga kuteerera ipapo ipapo. Kana sarudza kubva pane runyorwa rwezvino urikuimba nziyo dzemhando yako yaunofarira. »
Songbot Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros zvisinei, ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nakidzwa kupera kwevhiki nemitambo yemahara kana yakaderedzwa uye kunyorera kwenguva yakati wandei (Ndira 20)
Apple Inoburitsa Nyowani IOS 10 Dhizaina Asset yeSiketi uye Photoshop
Apple Inopedzisa Chizvarwa Chekutanga iPod Nano Bhatiri Yekutsiva Chirongwa